A place to say something: 2007
Kelly Services က နှစ်စဉ် ထုတ်ဝေနေကြ Singapore Salary Guide ပါ။ မိမိရာထူး (တာဝန်) နှင့် လုပ်သက် ပေါ်မူတည်ပြီး ရနိုင်တဲ့ လစာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ်... ငါဒီမှာ လုပ်သက် ၆ နှစ် (Computer/Network Administrator foraCyberCafe) ရှိတယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲတဲ့... သြော်... အဲ... အင်း... ရမှာပါ... :)
Download Singapore Salary Guide 2007
Download Singapore Salary Guide 2008
Posted by ko ye at 10:15 PM 1 comments
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းသား ဒွေးဟာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် ညနေခင်းက ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်းသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by ko ye at 11:19 PM0comments
Posted by ko ye at 1:40 PM5comments
Posted by ko ye at 11:39 PM 10 comments
URL : http://video.google.com/videoplay?docid=7078123874124388441
Posted by ko ye at 11:28 PM 1 comments
Posted by ko ye at 11:19 PM2comments
မြန်မာနှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာ အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုကဲ့သို့ဆို၏။ “ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုနဲ့ မတရားမှုတွေက ဖိစီး ထားပေမယ့် … ဖိစီးထားလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် … ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ ရိုးရာပွဲလမ်းတွေမှာ ရနိုင်သမျှ အခွင့်အလမ်းတွေကတဆင့် ပျော်လို့ရနိုင်သမျှ ပျော်ဖို့ကို ထူးထူးခြားခြား တတ်နိုင်စွမ်းသူတွေပါ” ဟူသတည်း။
Posted by ko ye at 11:13 PM0comments
Labels: Myanmar, Songs
အကြိုက်ဆုံး Window Vista ကို Support လုပ်တဲ့ Free Sofwares
ကျနော် အကြိုက်ဆုံး Window Vista ကို Support လုပ်တဲ့ Free Sofware လေးတွေပါ။ Software တွေကို ၀ယ်သုံးဘို့ဆိုတာကတော့ .... ဟီး Money က... :P
(ကိုယ်ကိုတိုင်က Programmer ဆိုတော့လဲ သူများရောင်းဘို့ လုပ်ထားတဲ့ Application တွေကို (တတ်နိုင်သလောက်) ခိုးမသုံးချင်ဘူးလေ... ၀တ်လည်မှာ သေချာကာကိုး... )
1. WordWeb Dictionary (Desktop Dictionary)
2. Virtual Clone Drive (Virtual CD/DVD Drive, ISO format support)
3. Free Easy Burner (CD/DVD Burning Software)
4. FileZilla (FTP file upload tools)
5. Free Download Manager (Faster File Download, Stop-Resume Support)
6. Picasa (Photo management application)
Posted by ko ye at 2:11 PM 1 comments
How guys select the girls they want to marry?
www.friendstar.com blog မှာ ပထမဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ Post လေးပါ...
firendster account ရှိမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေဖြစ်ကြရအောင် ဒီမှာ(www.friendster.com/koye) ကျနော့ရဲ့ friendster ပါ
Posted by ko ye at 1:13 AM 1 comments
ကြံကြံဖန်ဖန် ကိုရဲက ပေါက်တတ်ကရ ရေးတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့
Google TiSP ဆိုပြီးလုပ်မလို့တဲ့လေ... internet ကို အိမ်သာထဲက connection ယူမလို့တဲ့။
တော်တော်နောက်တဲ့ Google ...
- Free, fast and highly reliable
- Easy to install -- takes just minutes
- Vacuum-sealed to prevent water damage
[အော်... ဒီနေ့က ....... ဆိုတော့လဲ... အဟ]
Posted by ko ye at 10:34 PM0comments
အကြိုက်ဆုံး Gtalk Custom Status Messge
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Gtalk Custom Status Messge ပါ။
ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲခံရမှာ မကြောက်ဘူးထင်တယ် :D
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ပေးတာပါ... QQ လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပဲ အဟ...
“Internet join လို့ရတဲ့မင်းလေးကို အရမ်းချစ်တယ်...
ကြင်နာသူရေ I love you...
သတိရတဲ့အခါ I miss you...
Mailbox ထဲမှာ ငါ့ရဲ့အချစ်တွေဟာလေ မင်းအတွက်ပါ....
ညအိပ်လို့မရရင် I sick you....”
နားထောင်လို့တော့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဆိုတဲ့သူတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိဘူး။
Download & listen :)
Posted by ko ye at 2:02 PM0comments
R ဇာနည်ကနေ G ဇာနည်ဖြစ်သွားပြီဆိုပဲ.. အဟ :P
ကဲကဲ... အပျိုကြီး အပျိုလေးတွေရေ... ကြည့်ပြီး အသည်းယားမနေကြနဲ့
Posted by ko ye at 1:36 PM2comments
Window Vista Ready ZawGyi Myanmar Unicode Keyboard Layout
Vista install လုပ်ပီးကတည်းက ZawGyi Keyboard ကို Install လုပ်လို့မရတော့ ညစ်နေတာ...
ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပီ... Vista User တွေအားလုံးလဲ အဆင်ပြေရအောင် Upload လုပ်ပေးလိုက် ပါမယ်..
ခုလုပ်ပေးထားတဲ့ Installer မှာ Win386 (32bit) အပြင် 64 bit Window XP, 64 bit Vista ပါ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
Setup.exe ကို Run ပြီး Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Download Window Vista Ready ZawGyi Myanmar Unicode Keyboard Layout (254 KB)
Posted by ko ye at 5:48 PM 20 comments
အကြိုက်ဆုံး Window Vista ကို Support လုပ်တဲ့ Free ...
Window Vista Ready ZawGyi Myanmar Unicode Keyboard...